Discovery domain: fitantanana orinasa amin'ny fananana domain | Martech Zone
Discovery domain: fitantanana orinasa amin'ny fananana domain
Alatsinainy, Aogositra 8, 2016 Russell Artzt
Misavorovoro eo amin'ny tontolon'ny nomerika ny savorovoro. Ny orinasa rehetra dia mety hamoy mora foana ny fananany dizitaly amin'ny vanim-potoana izay isian'ny fomba fisoratana anarana amin'ny fomba maro am-polony ary rehefa mampiditra tranokala vaovao hatrany ny fifangaroana sy ny fahazoana.
Domains voasoratra anarana nefa tsy novolavolaina mihitsy. Tranonkala mandeha an-taonany maro tsy misy fanavaozana. Hafatra mifangaro amin'ny sehatra marketing. Fandaniana miverimberina. Vola very.
Toetrandro miovaova izy io.
Miovaova hatrany ny tontolon'ny nomerika an'ny orinasa, ary mety ho sarotra ny manara-maso raha tsy tsy azo atao izany.
Orinasa maro no efa sahiran-tsaina amin'ity korontana nomerika ity.
Diniho ny orinasa nanandrana nisoratra anarana domain iray manokana ary nahita fa efa nalaina. Zahao ny tranokala, fantatry ny mpitantana ny atiny izay nitovy be tamin'ny marika sy marika famantarana azy ireo ary nanomana haingana ny sampan-draharaha ara-dalàna - vao nahitana ny fisoratana anarana nosoratana ho an'ny sampana vao nahazo vola.
Mazava ho azy fa niahiahy ny orinasa fa hisy ny hosoka, ary ho nandany vola be izy ireo hiadiana amin'izany satria tsy fantatr'izy ireo fa azy avokoa izy ireo.
Ohatra iray amin'ny korontana misy eo amin'ny tontolon'ny nomerika io. Tena sarotra ny manara-maso ny zava-drehetra, na aiza na aiza, ary ny mahatakatra tsara izay tena ananao. Miteraka fikorontanana izany ary hanonitra ny volan'ny orinasa.
Misy risika hafa atrehin'ilay mpivarotra nomerika maoderina, ao anatin'izany ireo mpiasa tsy mahalala fomba mamolavola sehatra tsy fantatry ny C-suite na mandefa atiny tsy manara-penitra ao amin'ny fantsona orinasam-panjakana.
Azo atao ny mihazakazaka ny orinasany manokana amin'ny mpiasa misoratra amin'ny orinasa ny mpiasa. Mety nisoratra anarana samihafa izy ireo saingy nampiditra ireo vokatra na logo an'ny orinasa. Ny orinasa dia manadino fa fantany tsara izay ananany nomerika, saingy fahita matetika ny tsy fahafantarany.
Ny risika fanampiny dia misy ny trosa tsy ampoizina - ny mety mampidi-doza mety hiteraka korontana ny sombin-javatra sasany ao amin'ny tranonkala tsy fantatra izay lalina ao anaty portfolio-n'ny orinasa iray.
Raha tsy mifehy ny fonenanao ianao, ahoana no ahalalanao ny momba azy ireo? Raha mpiasa misandoka na mpandraharaha tsy nahazo alalana no misoratra anarana amin'ny anaran'ny orinasa misy anao ary mandefa fampahalalana manala baraka na diso, dia mety ho tompon'andraikitra ianao.
Eo ihany koa ny loza ateraky ny orinasa mifaninana amin'ny tenany - tsy ny famelana ny SEO sy ny haitao marketing matanjaka hafa eo ambony latabatra ihany, fa ny tena mandratra ny orinasan'ny tsirairay amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo ho fanoherana.
Ohatra, milaza ianao fa mivarotra karazana widgets telo, natsangan'ny fizarana samihafa tao amin'ny orinasanao. Raha mamoaka izany tsara ianao, ny motera fikarohana dia hahita anao ho toy ny herinaratra widget ary hanosika anao ho eo an-tampon'ny lisitr'izy ireo. Fa raha tsy misy ny fandrindrana, ireo motera fikarohana dia mahita orinasa telo tafaraka tanteraka, fa tsy mahazo fampisondrotana avy amin'ny halehibenao dia mandondona anao any aoriana ianao.
Ireo anton-javatra rehetra ireo - manomboka amin'ny fandaniam-bolan'ny registrar domain marobe ka hatramin'ny orinasa mitazona tranokala tsy fantatra an'arivony maro - mamorona fisafotofotoana, manalemy ny marika ary manakana ny orinasa tsy hankafy dian-dizitaly matihanina, mahomby sy mora raisin'ny mpampiasa.
Alohan'ny hieritreretan'ny orinasa iray ny fanatsarana izany dian-tongotra izany dia tsy maintsy faripariny feno izany. Manomboka amin'ny fametahana an-tsarintany tanteraka ny fananana nomerika an'ny orinasa izany, tsy misy dikany amin'ny vanim-potoana izay miovaova tsy tapaka ny sehatra an-tserasera
"Ahoana no ahalalanao ny hetsika tokony hataonao raha tsy fantatrao izay anananao?" manontany an'i Russell Artzt, mpanorina sy CEO an'ny Digital Associates. “Rehefa manana an'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mandray fanapahan-kevitra manan-tsaina momba ny fanarenana ny tontolo nomerika.”
Midira Digital Associates, ilay orinasam-barotra nomerika izay manampy ny mpanjifa hahatakatra ny tontolon'ny nomerika alohan'ny hanolorany lalana. Eo afovoan'ny Digital Associates dia ny Domain Discovery, vokatra vaovao izay afaka mahita ireo domains voasoratra anarana amin'ny orinasa iray nomena. Mampiasa tahiry manerantany mahery vaika mihoatra ny 200 tapitrisa domains sy orinasa 88 tapitrisa izy, miaraka amina domains vaovao iray tapitrisa fanampiny isan-kerinandro.
Domain Discovery dia vahaolana rindrambaiko azo zakaina indrindra izay manara-maso ireo orinasa manerantany 88 tapitrisa sy sehatra voasoratra anarana maherin'ny 200 tapitrisa - miaraka amina iray tapitrisa fanampiny ao anaty tahiry isan-kerinandro - hamaritana ny dian-tarika nomerika an'ny orinasa.
Azo refesina amin'ny orinasa amin'ny habe rehetra, ny Domain Discovery dia mampiasa ny angon-drakitry ny orinasa mba hamaritana ny antsipirian'ny firafitry ny orinasa mihoatra ny 88 tapitrisa eran'izao tontolo izao - ny zava-drehetra manomboka amin'ny adiresy IP ka hatramin'ny nomeraon-telefaona mankany amin'ireo mpitantana C-Suite - hamantarana ny fisoratana anarana mety ho tsy ho azon'ny fitaovana fikarohana fikarohana mahazatra.
Raha vantany vao mahatakatra ny fananany nomerika ny orinasa, Digital Associates dia afaka mamakafaka ny zava-bitan'ny orinasa an-tserasera ary mamolavola paikady handrindrana ireo hafatra ara-barotra, hampihena ny fandaniana nomerika ary hampitomboana ny tombom-barotra.
Ireo orinasa ireo no tena manana ny diany nomerika feno izay hahomby amin'ny toekarena ankehitriny. Amin'izao fotoana izao anefa, ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mahatsapa ny hakantony kely ananany amin'ny fananany nomerika sy ny fomba fampiharana ny fanaraha-maso teknolojia sy fifandanjana sasany mety hahatonga ny fahasamihafana rehetra.
Tags: mpiara-miasa nomerikafahitana domainfitantanana domainsehatrafitantanana domains
Russ Artzt no mpanorina sy CEO an'ny Digital Associates, izay niaraka tamin'i Vince Re, Chief Technologist, dia namolavola vahaolana rindrambaiko miorina amin'ny rahona hanampiana ny orinasa hahay hifehy ny tontolony nomerika.
Call to Action: Inona no atao hoe CTA? Ampitomboy ny CTR anao!
Mahafinaritra ve i Emojis amin'ny fifandraisana amin'ny varotrao? ?